Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Qoob-ka-ciyaarka dambe looma oggola meelaha lagu caweeyo ee Berlin
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Music • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Mustaqbalka dhow, goobaha lagu caweeyo ee Jarmalku waa inay joojiyaan shaqada marka heerka caabuqa todobada maalmood ahi uu ka bato 350 100,000 qof ee degan gobol la siiyay.
Ka dib fadhi gaar ah oo uu yeeshay golaha senate-ka ee Berlin, maamulka caasimadda Jarmalka ayaa ku dhawaaqay in aan dheel dambe laga ogolaan doonin goobaha lagu caweeyo ee magaalada laga bilaabo Arbacada soo socota.
As BerlinMaamulka ayaa adkeeyay xannibaadaha sababtoo ah kororka kiisaska COVID-19, naadiyada iyo discos-yada ayaa wali loo oggolaan doonaa inay furnaadaan, in kasta oo ay ugu wacan tahay farsamooyin sharci ah oo illaa hadda ka hortagaya dowladda magaalada inay gebi ahaanba xirto goobahaas.
GermanyMaamullada gobollada iyo federaalka, si kastaba ha ahaatee,, waxay ku heshiiyeen toddobaadkan in mustaqbalka dhow, goobaha lagu caweeyo ay tahay inay joojiyaan shaqada marka toddobada maalmood ee heerka caabuqa uu dhaafo 350 100,000 qof ee deggan gobol la siiyay. Berlin waxay hadda taagan tahay qiyaastii 360.
Makhaayadaha iyo baararka ayaa sidoo kale loo oggolaaday inay albaabadoodu furnaadaan hadda, in kasta oo hagitaan cusub oo ku saabsan fogeynta bulshada la sameeyay, iyagoo ku baaqaya miisas yar, iyo tallaabooyin kale. Baahnayn in la sheego, dhammaan goobahaas dadweynuhu waxay u furan yihiin oo keliya kuwa la tallaalay ama dhawaan laga soo kabsaday COVID-19, sida uu qabo xeerar la soo saaray bartamihii Noofambar.
Xeerarka cusub ee dhaqan galaya usbuuca soo socda ayaa sidoo kale xaddidaya tirada dadka ka qayb qaadanaya munaasabadaha waaweyn, iyadoo saqafka meelaha bannaanka la dhigay 5,000 iyo kala badh tiradaas kulamada gudaha. Taasi waxay khusaysaa sidoo kale ciyaaraha kubbadda cagta ee xirfadleyda ah.
Kulamada gaarka ah, xaaladaha uu jiro ugu yaraan hal qof oo aan la tallaalin oo ka qayb qaadanaya, xadku wuxuu taagnaan doonaa hal qoys iyo laba qof oo dheeraad ah. Isagoo ka hadlaya tillaabooyinka, ku-simaha duqa magaalada Berlin, Michael Müller, wuxuu sheegay in "kuwa la tallaalay oo la soo kabsaday ay si cad u leeyihiin xorriyado badan."
Si kastaba ha ahaatee, xitaa haddii dhammaan ka qaybgalayaashu ay ka tirsan yihiin mid ka mid ah labadan qaybood, weli looma oggola inay isugu yimaadaan kooxo ka badan 1,000 qof hawada furan, iyo 500 oo gudaha ah.
On BerlinGaadiidka dadweynaha, oo ay ugu sarreeyaan in la tallaalo ama la soo kabsado, maaskaro sidoo kale waa qasab dhammaan rakaabka, oo toddobaadka soo socda Berliners waa inay xidhaan mid keliya ma aha marka ay saaran yihiin tareenka laakiin sidoo kale marka ay ku sugayaan meel bannaan ah. .